ပညတ္တိကျမ်းတစ်ကော်ပိုရေးရှင်းက၎င်း၏ပိုင်ရှင်များထံမှသီးခြားတရားဝင် "လူတစ်ဦး" ကပြောပါတယ်။ ပိုင်ရှင်တွေများ၏အသက်အရွယ်သေချာပေါက်ကုမ္ပဏီများ၏အသက်အရွယ်နှင့်အတူကိုက်ညီတဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ HJ Heinz ကုမ္ပဏီက 1869 တည်ထောင်ခဲ့ကွောငျးကို advertise အခါ, ကရှယ်ယာရှင်များအပေါငျးတို့သဟောင်းများကို 100 နှစ်အတွင်းကောင်းမွန်စွာဖြစ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာကုမ္ပဏီ၏အဲဒီနှစ်များတွင်တင်သွင်းခဲ့ကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။ ဖောက်သည် advertising အခါသင်အလားတူယုံကြည်ကိုးစားမှုအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကုမ္ပဏီ၏အသက်အရွယ်ကိုသင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ရပြီထိုကာလ၏အရှည်ကိုသင်ဆည်းပူးသောကုမ္ပဏီ၏အသက်အရွယ်နှင့်ညီမျှသည်အထူးသဖြင့်ရှိလျှင်, မကြာသေးမီကတည်ထောင်ခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထက်ဖောက်သည်များနှင့်ငွေချေးဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ဟာ 12 နှစ်ပေါင်းများအတွက်ပိုက်လယ်ပြင်၌ဖြစ်ရပြီဆိုပါစို့ကြကုန်အံ့။ သင့်ရဲ့ရှေ့နေနှင့်စာရင်းကိုင်သင်တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အခွန်ငွေစုဘို့ထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ရပြီအချိန်ပမာဏနှင့်အတူကိုက်ညီမယ့် 12 နှစ်အရွယ်အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆည်းပူး။ သင်အလားအလာဖောက်သည်ကိုသင်ကုမ္ပဏီဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကရက်စွဲကိုဖြည့်စွက်သည်သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းသင်အမှန်တကယ်စီးပွားရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါပြီအချိန်ပမာဏကိုနှင့်အတူကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟုမြင်လိမ့်မည်, တစ်ဒါဇင်နှစ်ပေါင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ရပြီကြောင်းကြေငြာသောအခါဤလမ်း။
ထိုနည်းတူစွာထူထောင်အကြွေးများနှင့်လက်ရှိအကြွေးလိုင်းများနှင့်အတူကုမ္ပဏီများနှင့်အခြား active စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလေးလည်းအဖြစ်သင့်ကုမ္ပဏီအပေါ်အကြွေးတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကြီးမားတဲ့ဘဏ္ဍာရေးတိုးတက်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအသက်အရွယ်ဆက်ဆက်တစ်ခုတည်းသောငွေချေးအတွက်အချက်နှင့်စီးပွားရေးယုံကြည်ကိုးစားမှုမရဖြစ်ပြီး, ငါတို့သည်သင်တို့အသက်ကြီးကုမ္ပဏီဝယ်ယူသောယနေ့အထိအဖြစ်အပြည့်အဝထုတ်ဖော်အကြံပြုသတိပြုပါရန်တာဝန်ရှိသည်။
သငျသညျပြီးသားကပူးတွဲအကြွေးလိုင်းများရှိကြောင်းကုမ္ပဏီရရှိနိုင်သည်ဆိုသညျကားသောဤနေ့နှင့်အသက်အရွယ်အတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသတိပြုပါ။ သင်တစ်ဦးအသက်ကုမ္ပဏီဆည်းပူးလိုပါကကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးပါ။ သင်ကဆည်းပူးပြီးနောက်ငါတို့သည်သင်တို့ပေါ်မှာအကြွေးတည်ဆောက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီများထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ထိုကဲ့သို့သောကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် LLCs အများအပြားပေးထားပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရရှိနိုင်ကနေဒါ Corporation / ကမ်းလွန်အများအပြားအသက်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းနီဗားဒါးကော်ပိုရေးရှင်း, ဝဲကော်ပိုရေးရှင်း, Wyoming ကော်ပိုရေးရှင်းရှိပါတယ်။ လျင်မြန်စွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလေးလည်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကမကြာခဏတက်ကြွသော Operating အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသော်လည်းကုမ္ပဏီများကိုလည်းပြီးသားကော်ပိုရိတ်အကြွေးရမှတ်များရှိသည်နှင့်ငွေချေးနှင့်အတူဆက်ဆံရေးထူထောင်သောဤတိုင်းပြည်တွင်တည်ရှိ။
ကုမ္ပဏီများထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ထားတဲ့အသက်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီပေါင်းကျနော်တို့ဒွန်း & Bradstreet နှင့်အခြားအကြွေး rating အေဂျင်စီများနှင့်အတူတစ်ကော်ပိုရိတ်အကြွေးရမှတ်တည်ဆောက်တဲ့ Program ကိုပါဝင်သောအထူးအထုပ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်အခွင့်ပြုချက်အပျေါမှာ, စီးပွားရေးချဲ့ထွင်မှု, စီးပွားရေးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှုများအတွက်အကြွေးစီစဉ်ကူညီနိုင်သူငွေချေးနှင့်အဆက်အသွယ်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုအခြားပရိုဂရမ်အိမ်ခြံမြေသင်တန်း, အတိုင်ပင်ခံနှင့်ဖြည့်စွက်အကြွေးအဆောက်အဦအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုမှသုံးနေ့ရက်ကာလအဘို့သင့်အိမ်မြို့မှလာကာအထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုပေးအိမ်ခြံမြေကျော် $ 1 သန်းရရှိခဲ့သည်ခဲ့သူတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံကျွမ်းကျင်သူအဘို့အစီစဉ်ပါ။ ဤဂုဏ်သတ္တိကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုအောင်, သင့်လျော်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမရရှိနိုင်လျှင်, နှင့်အရောင်းအဝယ်အတွက်တတ်နိုင်သမျှနည်းနည်းပိုက်ဆံများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးဖို့ဘယ်လိုဖေါ်ပြခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနမြောက်မြားစွာရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်သက်တမ်းအတွက်ရှိညွှန်ပြနေသောကြောင့်ဤစာမျက်နှာမှယခင်ခေါင်းစဉ်, ထူထောင်အကြွေးများနှင့်လက်ရှိအကြွေးလိုင်းများနှင့်အတူအသက်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းရည်ညွှန်း SEO ဆိုသည်မှာရည်ရွယ်ချက်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်စာမျက်နှာ၏ဘာသာရပ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲပါပြီ။ မှတ်ချက်: အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးတင်ပြအဆိုပါအစီအစဉ်ကိုရရှိနိုင်မရှိတော့သည်နှင့်သာရည်ညွှန်းသည်။
အိမ်ခြံမြေများအတွက်အကြွေးရယူကူညီပါ, များသောအားဖြင့်ဖွင့်ရန် $ 1 သန်းအများဆုံး - သင်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သငျသညျရန်ပုံငွေများအတွက်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူအဆိုပြုချက်တင်သွင်း။ သင်, ချေးငွေခွင့်ပြုချက်မှဘာသာရပ်တစ်ခုငွေချေးအဖွဲ့အစည်းများကအိမ်ခြံမြေပထမဦးဆုံးပေါင်တို့အတွက်လုံခြုံအကြွေးအတွက်အထိ $ 1 သန်းကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ Plus အား, ငါတို့ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီမှချေးငှားဖို့ဆန္ဒရှိနေသောအများအပြားထပ်တိုးပုဂ္ဂလိကငွေချေးနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိသည်။ သဘာဝကျကျ, ပေးသောသူပထမဦးဆုံးအိမ်ခြံမြေတန်ဖိုးချေးငွေပမာဏကိုထောကျပံ့များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီငွေပေးငွေယူရန်ပုံငွေမီချေးငွေအတည်ပြုပြီး underwriting မှတဆင့်ပေးသောအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းကိုမညျဖွစျကွောငျးကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သူတစ်ဦးကိုယ်တိုင်ကအတွက်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC ရှိခြင်း, နားလည်အဖြစ်တစ်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းသို့လမ်းလျှောက်ဖို့တဦးတည်းကို enable မဒေါ်လာစျေးဥပဒေကြမ်းများနှင့်အတူမိုးလိမ့်မည်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းဆရာရိုးရှင်းစွာအိမ်ခြံမြေနှင့်မည်သို့သင့်ကုမ္ပဏီနာမတော်၌အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင်မည်သို့သွန်သင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်နှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါင်းအသင်း client များအတွက်ငွေကြေးဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာစီစဉ်ပေးခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အပေါင်ခံပွဲစားများမဟုတ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကချေးငွေအပေါ်ကော်မရှင်ဝင်ငွေမရကြဘူး။ ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာချေးငွေစီစဉ်များနှင့်သင့်လျော်သောငွေချေးရန်သင့်အားရည်ညွှန်းဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ သို့သျော, သဘာဝ, မဆိုအထူးသဖြင့်ငွေပေးငွေယူငွေကြေးထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံချက်မရှိပါ။ ခရက်ဒစ်ဖြန့်ဖြူးပေးသောသူ (S) မ BY ချေးငွေလုံခြုံမှုအတည်ပြုချက်မူတည်နေသည်။
one-on-one သင်တန်း - အကြှနျုပျတို့သညျကိုလေ့ကျင့်ရန်သင့်မြို့မှအိမ်ခြံမြေကျော် $ 1,000,000 ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူပေးပို့ အိမ်ခြံမြေအကြွေးရရှိရန်မည်သို့နှင့်မည်သို့အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ပြန်လာတိုးမြှင့်ဖို့။ ဒါကတစ်ဦးနှစ်ဦးမှသုံးနေ့ကလေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စာသင်ခန်းလေ့ကျင့်ရေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့မြို့မှာတစ်ဦးချင်းစီ 1-on1 လက်ပေါ်, မျက်နှာ-to-မျက်နှာလေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသင်တန်းဆရာသင်တို့နှင့်အတူအဂုဏ်သတ္တိများကိုရှာဖွေမည်, များသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကငွေမရှိသောအနည်းငယ်သာအတူကမ်းလှမ်းချက်ကိုအတူတူထားရန်သင်မည်သို့ပြနှင့်မည်သို့အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံအရှိဆုံးငွေရှာဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီများထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏စီမံခန့်ခွဲမှု 1994 ကတည်းကဒီလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပတ်သက်. One-On-တဦးတည်းလေ့ကျင့်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့သူတိုင်းက client အလွန်အမင်းကျေနပ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သငျသညျသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ဒီတစ်ခု-on-တဦးတည်းလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်ပါလိမ့်မည်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ သင်ကသင်တန်းဆရာရဲ့ခရီးသွားအခကြေးငွေကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ဟာသင်တန်းဆရာလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုင်းပြည်အနှံ့သွားလာရန်လိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိအကြောင်း, ငါတို့သည်သင်တို့နိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်နှင့်ခရီးသွားကုန်ကျစရိတ်ကွဲပြားသောကြောင့်, လူတိုငျးအတှကျကုန်ကျစရိတ်ကိုတက်အထိမ်းအမှတ်ချင်ကြပါဘူးသေချာစေချင်သည်။ ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ဟိုတယ်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်တစ်နေ့လျှင်အသွားအပြန်လက်မှတ်အဘို့အခြောက်ရာနဲ့နှစ်ရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီတော့ကုန်ကျစရိတ်အလွန်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
non-အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူဘို့အပိုဆောင်း Credit Lines - အတူစနစ်တကျအစီအစဉ်နှင့်သေဆုံးသူအခမဲ့ထောက်ခံမှုလိုင်းအပါအဝင်သင့်ရဲ့ကော်ပိုရိတ်အကြွေးအစီရင်ခံစာ, တည်ဆောက်ရန်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မည်သူတစ်ဦးကကော်ပိုရိတ်ချေးငွေဆောက်နည်းပြ။ သင့်ရဲ့နည်းပြသင်အသုံးပြုတည်ဆောက်နောက်ထပ်အကြွေးသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၌သင်တို့၏လျော်သောပါဝင်မှုမှဘာသာရပ်တစ်ခုဒွန်း & Bradstreet အကြွေးရမှတ်ရယူနိုင်အောင်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရရှိနိုင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကိုကြည့်ပါ အသက်ကုမ္ပဏီများမှ ဒီမှာ။
ပေးသောချေးငွေလုံခြုံရေးပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးအားမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်နှင့်စံ underwriting လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုံလောက်သောချေးငွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှတဆင့်ငွေပေးငွေယူအတည်ပြုထားပါတယ်ပြီးနောက်အထိ $ 1 သန်းအိမ်ခြံမြေများဝယ်ယူဘို့သဘောတူညီမှုအခြေခံအားဖြင့်သဘောတူညီချက်အပေါ်အာမခံငွေသို့ကြိုးပါလိမ့်မည် သို့မဟုတ်အခြားလုံခြုံပစ္စည်းများ။ တနည်းကား, ဒီအာမခံချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ရန်ပုံငွေတစ်ဦးပေးသောသူတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ငွေပေးငွေယူငွေကြေးဖို့သဘောတူထားပါတယ်ပြီးမှသာထုတ်ချေးရသည်။
အကြွေးလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပစ္စည်းကိရိယာများ, မော်တော်ကားနှင့်ကော်ပိုရိတ်ချေးငွေနည်းပြအစီအစဉ်၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ရယူနိုင်ငွေစုငွေချေးခွင့်ပြုချက်မှဘာသာရပ်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ချုပ်, ဖွစျနိုငျသောအခြားပစ္စည်းများတစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံတို့အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အိမ်ခြံမြေငွေကြေးလူနေအိမ်, စီးပွားဖြစ်, မြေယာများသို့မဟုတ်အခြားအိမ်ခြံမြေအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားလုံခြုံပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့သင်တန်းဆရာဟာကော်ပိုရိတ်ချေးငွေကို အသုံးပြု. အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူလက်ခံနိုင်ဖွယ်ကမ်းလှမ်းမှုပြင်ဆင်ထားရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသင်တန်းဆရာလည်းငွေပေးချေမှုကိုဆင်းနေတဲ့ငွေသားမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းကမ်းလှမ်းမှုပြင်ဆင်ထားရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။
ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC တစ်ဦးဒွန်း & Bradstreet (ဃ & B) မှနံပါတ်တစ်ခုနှင့် "Paydex®" ဂိုးသွင်းရှိလိမ့်မည်နည်း
ဟုတ်ပါတယ်။ အေဒီ & B, အရေအတွက်, Paydex ရမှတ်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်ချေးငွေအဆောက်အဦအစီအစဉ်အတွက်တင်သွင်းခဲ့တဲ့နောက်ထပ်အကြွေးလိုင်းများ၏အစိတ်အပိုင်းအစီအစဉ်ကိုပံ့ပိုးကူညီသည်။ သင်ကအကြွေးအဆောက်အဦးအစီအစဉ်တွင်အလုပ်တစ်ခုအများစုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်သူတစ်ဦးကော်ပိုရိတ်ချေးငွေနည်းပြတာဝန်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဒါဟာသင်လိုချင်တာတွေမူတည်ပါသည်။ ငွေသွင်းငွေထုတ်သင်နှင့်ပေးသောသူနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသဘာဝကျပါတယ်နှင့်ဟုတ်တယ်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု parameters တွေကိုအထဲမှာပါ။ ငွေကိုယင်းသို့အိမ်ခြံမြေအဖြစ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အာမခံငွေသို့, ငွေစုငွေချေးခွင့်ပြုချက်မှဘာသာရပ်ကြိုးဒါမှမဟုတ်သင်နဲ့အခြားပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူထားတဲ့အထဲကကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC မှပေးဆောင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါငွေစုငွေချေးအကြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအောင်မြင်တဲ့ပေးသောဆင်ကန်းတောတိုးပထမဦးဆုံးကတခြားချေးငွေ-ဘေးကင်းလုံခြုံမှု parameters တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာအပြင်ချေးငွေလုံခြုံရေးအတွက်လုံလောက်သောတန်ဖိုးကိုလည်းမရှိသေချာဖြစ်ကြည့်တာမရှိဘဲသင်၏အကောင့်သို့ဒေါ်လာသန်း Wired ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးသို့မဟုတ်လုံးနီးပါးတဦးတည်း-on-တဦးတည်းလေ့ကျင့်ရေး၌ဆုံးမဩဝါဒညွှန်ကြားချက်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်အကြံပေးချက်ကိုနောက်တော်သို့လိုက်ကြပါပြီသူဖောက်သည်ငွေကြေးအချို့ကိုပုံစံရယူပေးနိုင်ခဲ့ကြပြီ။
ဟုတ်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေများအတွက်လုံခြုံအကြွေးအစဉ်အလာပေးသောသူလိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြွေးရမှတ်များနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲ 100% ကော်ပိုရိတ်ချေးငွေနှင့်အတူရရှိနိုင်ခဲ့။ တနည်းအားဖြင့်, အ underwriter သင်သည်သင်၏ငွေချေးပါဝါမြှင့်တင်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်အတူကုမ္ပဏီ၏ခွန်အားပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။ သဘာဝကျကျ, ဒီပေးသောသူချေးငွေများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးမီကာလ၌ပိုမိုငွေချေးလုပ်ငန်းကိုအကြွေးထက်အခြား parameters တွေကိုကြည့်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်ငွေစုငွေချေးပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, အိမ်ခြံမြေပေါင်အတွက်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ကွန်ရက်များတည်ဆောက်ကြသူငွေချေးရှိသည်။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲဘဏ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းထက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေချေးပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်ကိုထံမှအကြွေးဖြန့်ဝေရန်ပုံငွေ။ တနည်းကား, ကျနော်တို့ချေးငွေစီစဉ်များနှင့်သာသင်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ငွေချေးရည်ညွှန်းကူညီပေးသည်။ ကျနော်တို့ချေးငွေအနေဖြင့်ကော်မရှင်မခံမယူကြဘူး။
ငါသည်သင်တို့ထံမှကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC, အကြွေးအစီအစဉ်ကိုသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေလေ့ကျင့်ရေးဝယ်ယူရန်ဖို့ကော်ပိုရိတ်ချေးငွေကိုသုံးပါနိုင်သလား?
အမှတ်သင်ဟာကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေနှင့်အတူအကြွေးဆောက်နှင့် / သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုဝယ်ယူရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်အတွက်ပိတ်သည့်အခါ, သင်သည်ဤအာမခံမထားဘူးသော်လည်း, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ဝယ်ယူရာမှပြန်သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာငွေသားခံယူနိုင်ကြသည်ဒါကြောင့်အိမ်ခြံမြေအရောင်းအတညျဆောကျပုံဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများအဆိုပါသင်တန်း၌ဆုံးမဩဝါဒလိမ့်မည်။
အဘယ်သူသည်ချေးငွေနှင့်အိမ်ခြံမြေများသို့မဟုတ်အခြားဝယ်ယူမှု၏ MIC မှခွင့်ပြု?
သငျသညျငါကော်ပိုရိတ်ချေးငွေကို အသုံးပြု. ဝယ်ယူရန်နိုငျကွောငျးအကြှနျုပျအဘို့အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပေးသလား?
သငျသညျအိမ်ခြံမြေမဆိုလက်ခံနိုင်သောအပိုင်းအစဝယ်ယူရန်ရန်ပုံငွေကိုသုံးနိုင်သည်သွားရမည်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်တန်း၏နည်းပြဆရာများက Pre-ပြခဲ့ကြကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုမကြာခဏရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည်သာတစ်ဦးအဆင်ပြေကဲ့သို့ဖြစ်၏နှင့်, ဤဂုဏ်သတ္တိဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်သင်တန်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သူတွေကိုနှင့်ကင်းကိုရှာဖွေသောအခြားဂုဏ်သတ္တိများဝယ်ယူရန်ရန်ပုံငွေကိုသုံးနိုင်သည်။
လူနေအိမ်, တစ်ခုတည်းမိသားစု, Multi-မိသားစု, စီးပွားဖြစ်, foreclosures, ကုန်ကြမ်းမြေ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင်တစ်ခုတည်းမိသားစု, foreclosures, ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ အသေးစိတ်သင်တန်း၌ဆုံးမဩဝါဒနေကြသည်။
ငါသည်ငါ့အိတ်ကပ်ထဲကငွေကိုယူပြီးမပါဘဲ 100% ငွေကြေးရယူနိုင်မလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 100% ငွေကြေးပုံဖွဲ့စည်းခဲ့ထားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းများအဆိုပါသင်တန်း၌ဆုံးမဩဝါဒနေကြသည်။ တစ်ဦးကဆင်းပေးချေမှုသည်သင်တို့ထံကသို့မဟုတ်သင့်အပေါငျးအသငျးမြား၏တဦးတည်းအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း, လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိသည်အခြားနည်းလမ်းများကိုသွန်သင်ပေးနေကြသည်။
ငါကပိုပြီးရင် $ 1 သန်းအကြွေးရနိုင်မလား?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအောက်မှာကနဦးအမြင့်ဆုံးအိမ်ခြံမြေနှင့်ငွေစုငွေချေး underwriting လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တန်ဖိုး၏သုံးသပ်ချက်ကိုမှဘာသာရပ် $ 1 သန်း, အဘို့ဖြစ်၏။ သင်တန်းကိုအောက်ပါအားဖြင့်သင်တို့ကိုချေးနိုင်ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်မေးရန်ဖြစ်လျှင်တူညီတဲ့အဖြေကိုက "ကားတစ်စီးကုန်ကျစရိတ်မဘယ်လောက်လဲ" ဒါဟာမူတည်ပါသည်။ ဒါဟာစျေးကွက်အတိုးနှုန်းနှင့်ချေးငွေများ၏အန္တရာယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒီအရေးအသားကကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC သင်နေထိုင်မည့်အိမ်ဝယ်ယူရန်ကူညီဖို့ရန်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်နိမ့်အန္တရာယ်ချေးငွေများ, အတိုးနှုန်း 5-8% ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရေတိုရေရှည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးငွေကြေးအဖြစ်အလတ်စားအန္တရာယ်ချေးငွေများ, 9-12% ရှိပါတယ်။ မြင့်မားသောအန္တရာယ်ချေးငွေများတဆယ်နှစ်ဆယ်လေးရာခိုင်နှုန်းရှိနိုင်ပါသည်။ မြင့်မားသောစွန့်စားမှုအန္တရာယ်ဒေသများအနီးဂုဏ်သတ္တိများသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရေတိုရေရှည်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအစကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များရှိကွဲပြားခြားနားသောအတိုးနှုန်းလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်ကြောင့်ချေးငွေလုံခြုံရေးအိမ်ခြံမြေတည်ရှိပြီးသောပြည်နယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အထက်ပါကိန်းဂဏန်းများဥပမာဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အတိုးနှုန်းမူကွဲ၏အချိန်နှင့်အခြားအချက်များအပေါ်ကျနော်တို့ကအတိုးနှုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးသောသူ (များ) အနာဂတျမှာအားသွင်းတံ့သောအရာကိုအပေါ်ကတိတော်များကိုလုပ်မပေးပါဘူး။
ငါယခုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဂုဏ်သတ္တိများ refinance ရန်အကြွေးကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်သလား?
ငါပြီးသားပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC အပေါ်အကြွေးတည်ဆောက်နိုင်သလား?
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်နိုင်ခြေသည်အဘယ်မှာရှိ program တစ်ခုပူဇော်ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုရှည်သည်ထက်ယူမယ်လို့နှင့်အကြွေးဝယ်လိုင်းများနှင့်အတူရှိပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC purchasing ကဲ့သို့တူညီသောအကြောင်းကိုကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည်အခြား client ကိုရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLCs အဆိုပါအကြွေးများအတွက်အတည်ပြုခဲ့ကြကြောင်းသက်သေပြနိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါဟာရာပေါင်းများစွာသောချေးငွေဖြန့်ဝေသည့်ငွေချေး '' ဖောက်သည်ကြပြီကြောင်းသက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ underwriting လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလွန်သွားကြောင်းအိမ်ခြံမြေရန်ပုံငွေအဆိုပြုချက်ရန်အကြွေးဘာသာရပ်အတည်ပြုသောချေးငွေအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်စာလုံးများကိုခံရကြပြီ။ အဆိုပါငွေစုငွေချေးခြင်းနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအရင်းအမြစ်များသူ့ရဲ့ network ကပိုကောင်းတယ်နှုန်းထားများရရှိရန်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေပမာဏကိုထူထောင်ခဲ့ပြီးသော်လည်းသဘာဝကျကျ, ငွေစုငွေချေးအိမ်ခြံမြေတန်ဖိုးချေးငွေပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့်ချေးငွေပေးသောသူအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းလိမ့်မည်ဟုသေချာဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာဤအမှုကိုပြုသောကြသူကတခြား client များရှိပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ Spokane, ဝါရှင်တန်၌အကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်တစ်ဦးကဘာမျှမနဲ့စတင်သူသင်တန်းကိုအောက်ပါက $6သန်းအသားတင်ရကျိုးနပ် built ကွောငျးကိုအကိုပြောသည်။ ဖလော်ရီဒါနှစ်ခုကတခြား client များသူတို့ကပထမဦးဆုံးနှစ်လအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများအတွက် $ 450,000 ဝယ်ယူညွှန်ပြ။ နောက်ထပ် client ကိုတစ်ရဲအရာရှိကြီးတစ်ဦးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်ထပ် client ကိုသူသညျမိမိအလုပ်အပေါ်ခဲ့တာထက်မိမိအစိတျအပိုငျးအချိန်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ရှားမှုများပိုမိုရရှိခဲ့သည်။ သဘာဝကျကျ, ရလဒ်များကိုခြားနားသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသာသင်ပြုလျှင် ... အလုပ်လုပ်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များမှတဆင့်သွားကြပြီသူဖောက်သည် 87.3% တစ်ဦးသို့မဟုတ်မျိုးစုံအိမ်ခြံမြေအရောင်းအအတွက်စေ့စပ်သောသင်တန်းသင်တန်းဆရာတစ်ဦးတို့ကပြောသည်နေကြသည်။ အနည်းငယ်ကျန်ရှိသောလူဦးအပေးအယူလေးလည်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါသို့မဟုတ်သင်တန်း၌ဆုံးမဩဝါဒအဖြစ်လိုအပ်သောအားထုတ်မှုန့ ်. ကြပြီမဟုတ်ဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ 1906 အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်သင့်အောင်မြင်မှုရဲ့လုံးလုံးကျူးလွန်နေကြသည်ပါပြီ။ အကြှနျုပျတို့သညျသုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အောင်မြင်မှုရရန်အဘို့အခိုင်ခံ့မက်လုံးပေးရှိသည်။ 1 ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးလုပ်ဖို့ညာဘက်အရာဖြစ်၏။2။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအများစုကိုပျော်ရွှင်ဖောက်သည်ထံမှပါးစပ်ရည်ညွှန်း၏စကားလုံးမှတဆင့်သောကြောင့်ထိုသို့ငါတို့အဘို့အစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသဘာဝကျပါတယ်။3။ သငျသညျမင်ျဂလာတဲ့အခါသင်တစ်ဦးထပ်ဖောက်သည်ဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကျေနပ်ရန်နှင့်သင်တို့နှင့်အတူရှိရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အပြည့်အဝရန်ပုံငွေတစ်ဦးချင်းစီငွေပေးငွေယူအတည်ပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်စပ်ငွေချေးတဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မဆိုအထူးသဖြင့်ငွေပေးငွေယူ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအာမခံချက်မထုတ်ဖော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများအပြားဖောက်သည်တဦးတည်းကသူ့၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုဘယ်လိုတစ်ခုအမှန်တကယ်ဥပမာလင့်ခ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. ခရက်ဒစ်နှင့်အတူကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Corporation နှင့် / သို့မဟုတ်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီများသူ့ရဲ့ပထမဆုံးငွေပေးငွေယူအပေါ်အမြတ်အစွန်းအတွက် $ 300,000 ကျော်ဝင်ငွေရရန်။
ငါကုမ္ပဏီနှင့်အတူသင်တန်း Associated မှစ. အဘယ်အရာကိုသင်ယူပါလိမ့်မည်လော
သင်ကရှိရင်းစွဲ Clients တွေအနေနဲ့ထံမှသက်သေခံချက်ဖူးပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်, အောက်ကဗီဒီယိုပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါသင်သင်တန်းများသို့တက်ရောက်ကြသူအကြွေးအစီအစဉ်နှင့်ကျောင်းသားများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသူအမှန်တကယ်ကျောင်းသား (s) ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့အထက် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားနှင့်သက်သေခံချက်အပိုင်းဆင်း scrolling အားဖြင့်မြင်ကြပြီစေခြင်းငှါတူညီသောဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။
ရုံဆိုအိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. ထိုအရပ်၌ချေးငွေကိုထောကျပံ့ဖို့လုံလောက်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပေးသောရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီလျှင်ဤအစီအစဉ်မှတဆင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုမှာ, သို့သော်, တဦးတည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အအောင်မြင်ဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံအတော်များများအပတ်တိုင်းအများအပြားကမ်းလှမ်းမှုပါစေ။
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပျနိုငျသငျသညျစိတျထဲတှငျရှိသည်အပေးအယူများမှာသို့မဟုတ်သင့်အကျိုးအတွက်မှမဟုတ်ကြလျှင်သင်ပြောပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို program နှင့်တကွကြွလာသောအလွန်အတွေ့အကြုံရှိအတိုင်ပင်ခံသင်ဒါမှမကောငျးအိမ်ခြံမြေအရောင်းအထံမှကောင်းသောအထဲက sort ကူညီပေးပါမည်။ ထို့အပြင်သင်တန်းရှိရာအမြတ်အများဆုံးအရောင်းအကိုရှာဖွေရန်နှင့်မည်သို့စနစ်တကျသင့်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတညျဆောကျပုံရန်သင့်အားပြောပြသည်။
အလွန်အတွေ့အကြုံနှင့်အလွန်အသစ်သော client များတသမတ်တည်းသူတို့ကသင်တန်းနှင့်အတိုင်ပင်ခံကနေကြီးမားတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစားပြောကြပါတယ်။ ကျနော်တို့သင်နှင့်သင့်အတိုင်ပင်ခံတူညီတဲ့ page တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်သို့မှသာသင်သည်ကြိုတင်သင့်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံအချိန်ကို အသုံးပြု. ရန် DVD ကိုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသင်တန်းများတက်ရောက်ရန်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒီအကြွေးတစ်ဦးရိုးရာလိုင်းအကြားခြားနားချက်ဖြစ်ပါသည်: အကြွေး၏ line ကိုခွင့်ပြုမီအကြွေးဝယ်တစ်ဦးရိုးရာလိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ချေးငွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေနေသည်။ သို့သော်ခြွင်းချက်အကြွေးတင်ပြပြီးနောက်အိမ်ခြံမြေပေးသောသူတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒီ program တွေနဲ့, ထိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ချေးငွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနောက်မှဖျော်ဖြေနေသည်နှင့်မရရှိနိုင်ပါကရက်ဒစ်၏အဘို့ကိုလျှင်အထူးသဖြင့်စီမံကိန်းခွဲဝေခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်အခါအကဲဖြတ်သည် ချေးငွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးသောသူမျက်နှာသာဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြွေးရမှတ်သေချာပေါက်အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ underwriter တန်ခိုးကမေးတယ်လျှင်ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC ကိုထိန်းချုပ်ထားသူ၏သမာဓိအတည်ပြုရန်သည်အတိုင်း, ကသို့မဟုတ်ချေးငွေအရည်အချင်းများရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤမျှလောက်မဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC ၏သမ္မတသို့မဟုတ်မန်နေဂျာမကောင်းတဲ့အကြွေးရှိပါတယ်လျှင်သေချာပေါက်ငွေစုငွေချေးလိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးချေးငွေခွင့်ပြုချက်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်မထားဘူး။ သို့သော်ကော်ပိုရေးရှင်းကိုထိန်းချုပ်ထားသို့မဟုတ် LLC ထို့နောက်ဖွယ်ရှိရိုးသားမှုတဲ့ကိစ္စပါလိမ့်မယ်ယင်းအကြွေးအစီရင်ခံစာအပေါ်လိမ်လည်မှုစီရငျခကျြတို့ကိုဖြစ်ပေါ်သည်ဟုလိမ်လည်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်ပုံစံရှိပြီးသူပါ။ ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြွေးသို့မဟုတ်ပေးသောရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးသလောက်အလေးချိန်ရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ရိုးသားမှု၏လေ့မရှိခြင်းပါပဲ။ မကြာသေးမီကာလ၌ငွေချေးသူတို့ကမကြာသေးမီအတိတ်ကပြုထက်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ပိုင်ရှင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြွေးအကြောင်းပိုမိုစိုးရိမ်နေကြသည်။
ပေးသောသူရှိလုံလောက်သောချေးငွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ငွေစုငွေချေးအရောင်းအဝယ်ရန်ပုံငွေဆန္ဒရှိကြောင်းကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာပဲ။ ကျနော်တို့ကချေးငွေပိတ်ဖို့ရန်ယူပါလိမ့်မယ်အချိန်ကိုအပေါ်ကတိတော်များကိုစေပါဘူး, သို့သော်ချေးငွေပိုမြန်ရိုးရာငွေချေးထက်ပိတ်ဖို့ရန်လေ့ရှိပါတယ်။ လုံလောက်သောအချိန်ပေးသောသူဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်ငွေပေးငွေယူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်ပါသည်။ လိုအပ်သောကြောင့်လုံ့လဝီရိယလုပ်ဖို့ပေးသောအဘို့အလို့ငှာကိုယ့်ကိုယ်လုံလောက်သောအချိန်ပေးဖို့သတိရပါ။ သငျသညျအလျင်ဖြစ်ကြောင်းရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပေးသောသူလိုအပ်တဲ့ချေးငွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုရှောင်ကွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်သင်၏အချိန်ဇယားပေါ်မှာရန်ပုံငွေပါဘူးလျှင်သင်ငွေသွင်းငွေထုတ်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ underwriting ကိုစှနျ့လှတျလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်စားရန်ဖြစ်တော်မူ၏ပိုက်ဆံ, Appraiser သို့မဟုတ်အခြားသောပစ္စည်းများအဘို့အကုန်ရပြီကြောင့်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များကိုရှောင်ကွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကချေးငွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူကျေနပ်မှုရှိပါသလဲအခါပေးသောသူကငွေပေးငွေယူရန်ပုံငွေအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းစိတ်ကျေနပ်မှုအခါသူတို့ကရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလိုအပ်ချက်အဘို့အခွင့်ပြုရန်သင့်ကိုယ်သင်လုံလောက်ပိတ်ပွဲအချိန်ပေးပါ။
အိမ်ခြံမြေ၏ရောင်းချသူတစ်စက္ကန့်ပေါင်နှံပြန်သယ်ဆောင်။ (ကျနော်တို့ကသင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောကမ်းလှမ်းမှုလုပ်ပုံကိုဖေါ်ပြခြင်းနမူနာကန်ထရိုက်ပေးနိုင်ပါသည်။ )
ပထမဦးဆုံးအပေါင်ခံချေးငွေဝယ်ယူစျေးနှုန်း၏ 50% ဖြစ်ခဲ့သည်။ (ထိုငွေစုငွေချေးချေးငွေအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းခံစားရညာဘက်အခြေအနေများနှင့်ဆိုပါကတန်ဖိုး၏ 80% အထိငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။ )
ရောင်းသူမှပေးဆောင်ရမည့်ဒုတိယပေါင်နှံငွေချေးဝယ်ယူစျေးနှုန်း၏အခြား 50% ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအကြွေး client ကိုမိမိအထဲကငွေမရှိသောအနည်းငယ်သာများအတွက်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်
ဝယ်ယူစျေးနှုန်း $ 500,000
တစျခုလုံးကို $ 500,000
အိမ်ခြံမြေတက် fix မှ $ 150,000 ချေး။
ဒါကြောင့် Client ကိုချေးဖို့လိုသည်
တစ်ဦး $ 650,000 ဝယ်ယူစျေးနှုန်းအပေါ် $ 500,000 ။
"ထိုက်တန်" $ 1 သန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုသီအိုရီအတွက် $ 1 သန်းတန်ဖိုးရှိဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့
စိစစ်ရေးစျေးနှုန်းများဖြစ် "သင့်ပါတယ်" ဘယ်အရာကိုအမှန်တကယ်ဈေးနှုန်းများနှင့်မအပေါ်ပြုမိနေကြသည်။ ဒါကြောင့်ဤဝယ်ယူမှုနဲ့အတူကျနော်တို့အခုပြီ
ထဲမှာသောကအခြားဂုဏ်သတ္တိများဈေး၌ $ 500,000 ၏နှိုင်းယှဉ်
ဧရိယာတန်ဖိုးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဖြစ်, ဒီအမှတ်ငြင်းခုန်နိုင်ပါတယ်သော်လည်း
Enhanced ယုံကြည်စိတ်ချရ - ထိုသို့သော "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကတည်းကတည်ရှိခဲ့ ... " သင်အမှန်တကယ်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းထက်၏နံပါတ်များအတွက်အထူးသဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စေ့စပ်ကြသောအခါဤစကားမှန်အရေးပါမှုသည်အဖြစ်လာသောအခါထုတ်ပြန်ချက်များကြော်ငြာ, ဖောက်သည်ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်အခါ နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီကကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းပေါ်ခဲ့သည်။
ကော်ပိုရိတ်အကြွေး - အဟောင်းကုမ္ပဏီရှိသည်ဖို့ဘဏ်များ, ပေးသွင်းသူများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အကျိုးတူအရင်းရှင်တွေနဲ့အကြွေးထူထောင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ရံကပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ ဒီထိုကဲ့သို့သောကြွေးမြီများနှင့်အမြတ်အစွန်းကဲ့သို့သောအခြားပိုမိုသိသာထင်ရှားသောအချက်များတို့တွင်အသေးစားအချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်သော်လည်း။ ရုံဆိုမကြာသေးမီကမှီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဲ့သို့အကြှနျုပျတို့သညျအသက်ကြီး entity မကြာသေးမီကရရှိခဲ့ဘူးသောအပြည့်အဝထုတ်ဖော်အကြံပြုပါသည်။
ကုမ္ပဏီများထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ချက်ချင်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ကြောင်းထူထောင်ကုမ္ပဏီများစာရင်းရှိပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးလာ, ပထမ-တာဝန်ထမ်းဆောင်အခြေခံပေါ်မှာရောင်းချကြသည်။ ဘဏ်အကောင့်များနှင့်အကြွေးဝယ်လိုင်းများစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြကြောင်းရရှိနိုင်ပါသည်ကော်ပိုရေးရှင်းရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ may သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်မရရှိနိုင်ရှိသည်မဟုတ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည်အခွန်သို့မဟုတ်တရားဝင်တာဝန်ယူမှုအနေဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တဦးတည်းချွင်းချက်အနေနဲ့နှစ်စဉ်ဂိမ်းအခကြေးငွေကြောင့်ရှိရာကယ်လီဖိုးနီးယားကော်ပိုရေးရှင်းပါဝင်နိုင်သည်။
အဆိုပါအိမ်ခြံမြေသင်တန်းသင်တန်းဆရာတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကတဆင့်ဝယ်ယူကြသည်ဟု၎င်းတို့ကုမ္ပဏီသုံးပြီးမျိုးစုံအိမ်ခြံမြေအရောင်းအတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောဖောက်သည်တစ်ဦးအလုံးအရင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏အကြီးမားဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာပညာရေးပါပဲ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC နှင့်အိမ်ခြံမြေဝယ်ခြင်းငှါအသုံးပြုဘယ်လိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရာပူဇော်သက္ကာကိုနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်ကိုထူးခြားသောသည်နှင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာတစ်ခုတူညီ program ကိုအခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကိုမရ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC နှင့်ဆက်စပ်သင်တန်းများနှင့်အတိုင်ပင်ခံနှင့်တကွသင်ပေးသည့်အခါငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်စားခံရကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။ ဤအကုန်ကျစရိတ်သူတို့ nonrefundable ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်ကိုပြန်ပြီးဆယ်မဟုတ်လို့ပဲ။ အချို့ချေးငွေတောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့, ချေးငွေတတိယပါတီများမှရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ တတိယပါတီမှတဆင့်မပြည့်စုံအဆိုပါချေးငွေသို့မဟုတ်ဤအစီအစဉ်ကိုတဆင့်ဝယ်ယူလျက်ရှိကြောင်းကုမ္ပဏီ၏အသုံးပြုမှုကိုမလိုအပ်ပေမည်ပေမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်၏နယ်ပယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးရန်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ဖို့ကွိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ကုမ္ပဏီများထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ကိုလည်းကို virtual အတွက်ရုံးနှင့်အမေရိကန်ပြည်နယ်နှင့်မေးလ် forwarding ကို, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်ဖက်စ်နံပါတ်လိပ်စာအပါအဝင်အများအပြားနိုင်ငံခြားတရားစီရင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ချင်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့မိမိတို့နေအိမ်လိပ်စာများကိုအသုံးပြုချင်ကြဘူးသူကလူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC များအတွက်အမေရိကန်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်တည်ထောင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းသင့်အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်အဖြစ်တစ်ဦးဒက်ဘစ်ကဒ်ရပါလိမ့်မယ်။ ပိုက်ဆံပိုသေးပမာဏ, သင်ဝယ်ယူမှုအဘို့သင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ပိုကြီးတဲ့ပမာဏအဘို့အသင်ဝယ်ယူမှုဖြစ်စေလိုဘယ်သူကိုကနေသူတို့အားဘဏ်၏အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဝါယာကြိုးပိုက်ဆံသုံးပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီများသင့်အကောင့်ကိုသင့်မျက်မှောက်တော်မပါဘဲထူထောင်စေခြင်းငှါဒါထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဘဏ်များဖို့လိုအပ် "သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီ Introducer" အက္ခရာပေးပါသည်။ သဘာဝကျကျကျနော်တို့ရှေ့နေနှင့်စာရင်းကိုင်များကအပြည့်အဝဥပဒေရေးရာလိုက်နာမှုနှင့်ဥပဒေရေးရာနှင့်အခွန်အကွံဉာဏျအကြံပြုပါသည်။
ကုမ္ပဏီများထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ပုံမှန်သုံးသပ်ပြီးနှင့်အများဆုံးအကျိုးရှိပြည်တွင်းနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းတရားစီရင်မှုသွားရောက်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဘဏ်များနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိသည်နှင့်အကောင်းဆုံးကိုသင်၏တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်ကိုက်ညီမယ့်အစီအစဉ်ကိုလုပ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်အိမ်ခြံမြေစျေးနှုန်းများနှင့်အိမ်ခြံမြေငွေချေးအစီအစဉ်များကိုသဘာဝတွင်သိသိဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကို client သကဲ့သို့သင်တို့နားလည်သဘောပေါက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်ကိုအသိပေးစရာမလိုဘဲကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါသဘောတူသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ရရှိနိုင်သကဲ့သို့, ရက်ချိန်းပေါ်တစ်နှစ်အဘို့ဤအစီအစဉ်ကိုအောက်မှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုပေး။
တစ်ဦးမှာ အသက်ကော်ပိုရေးရှင်း or ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း (စအဖြစ်ရည်ညွှန်း တည်ထောင်ရန်အကြွေးနှင့်အတူကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Corps or အကြွေးနှင့်အတူကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Corps ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ် အကြွေးလိုင်းများနှင့်အတူကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Corps or ထူထောင် Paydex နှင့်အတူအသက်ကော်ပိုရေးရှင်း TM ရမှတ်များ), မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး 1-888-444-4412, ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာ + 1-661-310-2688 မှာဝမ်းမြောက်စွာသင်ကူညီကြလိမ့်မည်တော်မူသောငါတို့၏အထူးကုတစ်ဦးနှင့်အတူဟောပြောလော့။7၏နာရီအကြားသောကြာနေ့မှတဆင့်တနင်္လာနေ့ကိုခေါ်ပေးပါ: 00 လေးနှင့် 5: 00 pm တွင်ပစိဖိတ်အချိန်။